Haddii aad leedahay waxbarasho dalka dibediisa ah | Informationsverige.se
Bogga ugu horeeya ee goobta intarnat-ka / Anigu waxaan helay sharciga deganaanshaha / Haddii aad leedahay waxbarasho dalka dibediisa ah
Halkan waxaad ka akhrin kartaa dheeraad ku saabsan waxa ay tahay inaad samayso haddii aad haysato waxbarasho dalka dibediisa ah. Waxaad turjumi kartaa shahaadooyinkaaga waxbarashadaas ama samaynta qiimeynta waxbarashadaada dalka dibediisa.
Xafiiska Shaqada ayaa kaa caawin kara in dukumentigan loo turjumo iswiidhish. Tani wax kharash ah uguma fadhido adigaaga ah shaqo raadiye ee ka diiwaan gashan Xafiiska Shaqada.
Halkan waxaad ka arki kartaa cinwaanada bogaga Xafiiska Shaqada xafiisyadeeda maxaliga ah. Warbixintan waxaa la helayaa iyadoo ah iswiidhish oo keliya.
Haddii aad waxbarasho ku dhamaysatay dal kale oo aan ahayn Iswiidhan, oo aad tahay muwaadin EU/EES ah ama aad codsatay sharciga deganaansho ee Iswiidhan, waxaad codsan kartaa qiimeynta waxbarashadaada.Tani waxay tahay in Guddida Jaamicadaha Sare iyo Jaamicadaha (UHR) qorayaan warbixin caddaynaysa waxa waxbarashadaadu u dhiganta dhinaca nidaamka waxbarasho ee Iswiidhan.
UHR waxay samaysay filim ku saabsan sida ay u qiimeeyaan waxbarashada dalka dibediisa. Filimkan waxaa la helayaa isagoo ah Iswiidhish, lehna qoraal Iswiidhish ah.
Haddii aad haysato waxbarasho dalka dibediisa ah oo aad soo dhamaystirtay heer dugsi sare, heerka xirfada ka dambeysa dugsiga sare ama heer mutacalim ah waxaa tani kuu qiimeyn karta UHR.
UHR waxay leedahay adeega qiimeynta taaas oo aad ku ogaanayso waxa waxbarashadaadu u dhiganto gudaha Iswiidhan. Adigu waxaad xitaa codsan kartaa qoraal kaas oo UHR ku qiimeynayso dukumentigaaga waxbarasho. Qiimeyntan waa bilaash.
Xiriiryada bogagga internetka ee ee UHR
Codso qiimeynta waxbarashadaada dalka dibediisa ah dhinaca bogga UHR. Adeegan waxaa lagu helayaa iswiidhish iyo ingiriisi. Akhri dheeraad ku saabsan qiimeynta waxbarashada dalka dibediisa oo ku qoran bogga UHR. Warbixintan waxaa lagu helayaa iswiidhish iyo ingiriisi. Isticmaal adeega qiimeynta ee UHR si aad u hesho macluumaadka ku saabsan waxa waxbarashadaadu u dhiganto gudaha Iswiidhan. Adeegan waxaa lagu helayaa iswiidhish iyo ingiriisi.
Waa muhiim inaad sida ugu dhakhso badan ee suurtagal ah u soo dirto codsigaaga ah in waxbarashadaada ay qiimeyso UHR.
Waxaa kale oo muhiim ah inaad soo dirto dhamaan dukumentiga loo baahanyahay marka aad direyso codsigan. Haddii aad xaq u leedahay inaad ka shaqayso gudaha Iswiidhan markaas waxaad xitaa xaq u leedahay fursada in la qiimeeyo waxbarashada aad ku soo dhammaysay dalka dibeddiisa. Tani micnaheedu waa in adigaaga muwaadin ka ah dal EU/EE ah ama haysta sharci degganaansho, sharci shaqo ama kaar LMA oo ansax ah aad codsan karto qiimeyntan.
Akhri dheeraad ku saabsan nooca dukumentiga loo baahanyahay oo ku qoran bogga UHR. Warbixintan waxaa la helayaa iyadoo ah iswiidhish iyo ingiriisi.
"Halkan ka akhri dheeraad ku saabsan nooca dukumenti ee looga baahanyahay ah magan-gelyo doonka.
Ma haysatid miyaa dukumentiga waxbarashadaada?
Haddii aad waxbarashadaada dugsiga sare ka dambeysa ku dhammaysay shahaado ama imtixaan, laakiin aanad haysan qaybo ama dhammaan dukumentiga taas caddaynaya, markaas UHR waxay mararka qaarkood si kastaba ha ahaatee samayn karaan qiimeynta waxbarashadaada. Si UHR u awooddo inay sameeyaan qiimeyn waa in waxbarashadaadu ahaato mid aad soo dhammaysay. Waa inaad xitaa sharraxdo sababta aanad u heli karin dukumentigaaga waxbarasho. Taasi waxay tusaale ahaan noqon kartaa sababtoo ah inaad qaxoonti tahay ama inaad waxbarashadaada ku soo dhammaysatay dal uu ka jiray dagaal. Qiimeyntan waxaad u isticmaali kartaa gundhig marka aad raadinayso shaqo, waxbarasho la sii watyo ama ka hor caddaynta aqoontaada.
Akhri dheeraad ku saabsan sharaxaada waxbarashada dalka dibediisa oo ku taala bogga UHR. Warbixintan waxaa lagu helayaa iswiidhish iyo ingiriisi.
Ka dib qiimeynta waxbarashadaada waxaad helaysaa warbixin taas oo caddaynaysa waxa waxbarashadaada dalka dibediisu ay u dhiganto dhanka nidaamka waxbarasho ee iswiidhishka.
Warbixintan maaha shahaado iswiidhish ah. Warbixintan waxay kabaysaa shahaadadaada dalka dibediisa oo ma baddelayso taas. Warbixintan waxay taageero u tahay adigaaga shaqo ka raadinaya Iswiidhan. Marka aad warbixintaadan tusto waxaa shaqo-bixiye fahmi karaa nooca waxbarasho ee aad haysato.
Warbixintan waxay xitaa ahaan kartaa taageero haddii aad qorshaynayso in aad waxbarashadaada ka sii wadato Iswiidhan. Maaha shuruud in la haysto qiimeynta UHR si loo codsado tacliin sare. Waxaad xitaa heli kartaa in waxbarashadaada ay qiimeeyaan jaamicad sare ama jaamicad aad codsatay xilliga codsigaaga.